कोरियामा कमाएको सम्पती श्रीमतीले कुम्ल्याएर हिडेपछि………. | News Dabali
कोरियामा कमाएको सम्पती श्रीमतीले कुम्ल्याएर हिडेपछि……….
August 15, 2017 | 9:50 am
चितवन ।बारा जिल्ला फेटा–८ की पुनम कुमारी गुप्ता राप्ती नगरपालिका ८ खुरखुरे चितवनका राज कुमार शाहसँग बिबाह भएको ६ महिना पछि बेपत्ता भएकी छन । बेपत्ता श्रीमतीको खोजीमा खुरखुरेका उनका श्रीमान ३३ आफ्नो श्रीमतीको खोजीमा हिडेको बन्दै सोमबार भरतपुरमा भौतारी रहेका थिए ।
आफ्नो जीवनका ३३ वर्षमध्ये उनले ६ वर्ष त कोरियामा काम गरेरै बिताए, तर कमाई भने अहिले हातमा लाग्यो शुन्य जस्तै छ । जो कोहीलाई लाग्न सक्छ, नेपालीले ठगे ? होइन । उसो भए दलाल वा लुटेराको फन्दामा परे ? त्यो पनि होइन । हुण्डीवालाले झुक्याए होलान् ? त्यस्तो पनि भएको होइन । तर उनि आफु लुटिएकोमा उजुर—वाजुर गर्दै छन् । आफु ठगिएको हो वा कुनै अकल्पनीय दुर्घटनाको शिकार भएको हो भनेर अझैसम्म खुट्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले सबैसँग सत्यतथ्यको खोजि गरिदिन हार गुहार गर्दैछन् । कुनै सुराक फेला परिहाल्छ कि भनेर यताउता भौतारिदै रहेछन्, भरतपुरमा ।
६ वर्ष कोरियामा विताईसकेका राजकुमारका लागी साउन २० गते, विगतका साउन २० गतेको जस्तो थिएन् । सालहरु फेरीएका थिए, दिनहरु फेरीएका थिए, जिवन पनि विस्तारै फेरिदैँ थियो तर विडम्बना यो साउन २० गतेको शुक्रबारले उनको जिवनमा ठूलै बज्रपात गर्यो । विहे भएको ६ महिना वित्नै नपाउँदै सातै जुनी सँगै जिवन विताउने बाचा कसम खाएर सात फेरा लिएर भित्र्याएकी श्रीमतीले अनका बाचा कसम मात्रै भुलिनन् । अहिले सम्मको कमाई पनि छिन भरमै गायब गरिन् र सारा सपना चकनाचुर गरिन् ।
को हुन राजकुमारः
चितवनको रापती नगरपालिका ८ खुरखुरे घर भएका राज कुमार गुप्ता विगत ६ वर्ष देखी कोरियामा बस्दै आएका थिए । कक्षा १२ सम्मको पढाई सकेर ठुलो सपना बोक्दै कोरिया पसेका गुप्ताले पाँच वर्ष कोरियामा विताएपछि गत माघमा पुनमसँग उनको मागी विवाह भएको थियो । विहेको ५ दिन अगाडी मात्रै नेपाल आएका राजकुमार विहे गरेर तीन महिनाको नेपाल बसाई पछि कोरिया फर्केका थिए ।
राजकुमारका अनुसार २६ सेप्टेम्बरमा उनि कोरियाबाट नेपाल फर्कने तयारीमा थिए । तीन महिनाको विदा लिएर सेप्टेम्बरमा नेपाल आउन लागेका उनले नेपालको टिकट समेत बुक गरिसकेका थिए ।
को हुन ? उनकी श्रीमती ‘पुनम‘
पुनम कुमारी गुप्ता (शाह) बारा जिल्ला फेटा ८ का सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ताकी छोरी हुन् । सुरेन्द्र गुप्ताकी दोस्रो छोरीको रुपमा जन्म लिएकी २५ वर्षिय पुनमले १२ कक्षा सम्म पढेकी छिन् । उनका तीन भाई र एउटा दिदी रहेको उनका श्रीमान राजकुमार गुप्ताले बताए ।
साउन २० गतेको दिन विगतका दिनजस्तै पुनमले राजकुमारलाई फोन गरिन, फरक यति थियो अरु दिन रमाईला प्रेमका कुरा हुन्थ्यो त्यो दिन (साउन २० गते) पुनमले फोनबाट आफु दाँत दुखेर विरामी परेको सुनाईन्, राजकुमारले भनेअनुसार उनिहरुबीच भएको फोन सम्बाद
पुनमः हेलो, म त दाँत दुखेर मर्न लागे अस्पताल जानुपर्यो
राजकुमारः हुन्छ भाईलाई लिएर जाउँ ।
त्यतीबेला फोन सम्बाद सकियो फोन राखिसकेपछि पुनमले देवर (राजकुमारको भाई) लिएर अस्पताल गईनन् उनि एक्लै चितवनको सेन्ट्रल अस्पताल पुगिन् जहाँ उनले पहिले देखि नै जचाउँदै आएकी थिइन् । राजकुमारका साथी नै त्यहाँ कार्यरत डाक्टर थिए तर त्यो दिन उनि रहेनछन् । आफ्नो नियमित डाक्टर नभेटेपछि उनले फेरी कोरियामा रहेका श्रीमान् लाई फोन गरिन् ।
पुनमः आज त तपाईको साथी हुनुहुन्न त यता अस्पतालमा
राजकुमारः त्यसो भए चितवन मेडिकल कलेज जाऊ ।’
बस राजकुमार र पुनमका बीचमा यहि नै अन्तिम फोन सम्बाद थियो । राजकुमारले भने अहिले उनको ‘फोन अफ’ छ । कहाँ छिन, कुन हालतमा छिन् कसैलाई थाहा छैन । शाहले ६ महिना पहिले बारा जिल्ला फेटा–८ का सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ताकी छोरी पुनम कुामारी गुप्ता सँग बिहे गरेका हुन । श्रीमती हराएको थाहा पाउने बित्तिकै राजकुमार कोरियामा नै बेहोस भए । नहुन् पनि किन, साउन २५ गते जन्मदिन परेकी पुनमका लागी उनले भनेजस्तै हीरा जडित सुनको औठी र उनैले अनलाइन भिडियो मार्फत रोजेको ब्याग र अन्य लुगा, कपडा अघिल्लो दिन मात्र जन्मदिनको उपहारको रुपमा किनेर दशैमा आउँदा ल्याउने गरि सुटकेशमा राखेका थिए । आफुले जति दुख गर्नुपरे पनि उनले पुनमलाई गहनाले छोपेका थिए । उनका कुनै रहर अपुरो राखेका थिएनन् । दशैमा घर आऊने टिकट काटीसकेका उनको सो टिकट रद्ध गरेर साथीहरुले भोलिपल्ट कै हवाई टिकट मिलाइदिएपछि उनि २२ गते काठमाडौँ झरे र २३ गते चितवन आएर यतिबेला श्रीमतीको खोजीमा व्यस्त छन् । तर, हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ ।
राजकुमारकी श्रीमती मात्रै वेपत्ता छैनन्, राजकुमारले दिनरात पसिना बगाएर कमाएको ३८ तोला सुन, ३ लाख नगद र मायाँ गरेर श्रीमतीलाई किनिदिएका महँगा बस्त्र समेत गायब छन् ।
उनले स्थानीय खैरहनी प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र नगरपालिका कार्यालयमा समेत हराएकी श्रीमतीको खोजि गरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन हालेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राजकुमारले घटनाका विषयमा किटानी दिईसकेका छन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार प्रहरीले हालसम्म गरेको अनुसन्धानबाट पुनमले प्रयोग गर्ने फोन नम्बर ९८२४२५२४४० मा निरन्तर सम्पर्कमा रहेका फोन नम्बरहरु ९८२११४४७३६, ९८०९२२९२२९ र ९८०४२०६२५१ देखिएका छन् । तर यी नम्बरहरु सकले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुनै कुरा पनि प्रहरीले भन्न चाहेन्, प्रहरीले यति भन्यो की राजकुमारले घटनाका बारेमा सबै खुलाएर जानकरी गराएका छन् । हामी घटनाको अनुसन्धा गरिरहेका छौँ ।
आफ्नी श्रीमतीको तस्बिर फेसबुकमा राखेर उनलाई भेट्टाईदिनेलाई १ लाख नगद उपहार स्वरूप दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।टिभी अन्नपुर्णबाट